भावनाका जङ्गलमा माया बिनाका इबरा – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsभावनाका जङ्गलमा माया बिनाका इबरा
September 24, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मैले चिनेको, शब्द 0
‘एकपल्ट आँखा बनाउँदा दश वर्षलाई पुग्छ अरे । अब दुई वर्ष त बाँच्नु छ, बित्थामा आठ वर्ष किन खेर फाल्नु भनी नबनाई बसेको छु,’ दुई वर्षअघि इन्द्रबहादुर राईलाई सिलगढीमा भेट्न जाँदा उहाँको आँखाबाट पानी बगिरहेको देखेर हामीले सोध्दा पाएको उत्तर थियो, यो ।
एक वर्षपछि पोहोर साल काठमाडौं तिलगङ्गामा उहाँले आँखा उपचार गरेको खबर रत्नमणि नेपालले भनेका थिए । जीवनलाई हेर्ने सजिलो बुद्धिको आँखा छन्, आईबी राईसँग । उहाँले जन्मकथाबारे लेख्नु भएको छ, बालासन नदीको पुलमा गएर हेरे मेरो जन्म साल थाहा हुन्छ । सजिलो भन्नु कि अप्ठ्यारो यस्ता कुरालाई ।
तर, यी प्रत्येक वाक्यले लामो व्याख्या माग्छन् । छोटोमा धेरै भन्ने कलाले भरिएको वाक्य रचक हो, उहाँ ।
जब मैले उहाँलाई पढ्न थालेँ, वाक्यैपिच्छे अडिन थालेँ । कैयौंपल्ट अलिकति पढ्दै थन्क्याउँदै पनि जान्थेँ । फेरि निकाल्न मन लागिरहन्थ्यो । गणितको सूत्र रटे झैं पटक–पटक दोहोऱ्याउँदै पढ्दै गर्दा आफ्नै प्रकारको बुझाइको अभ्यास हुँदै गयो मलाई । बिस्तारै रुचि बढ्दै गयो र पढ्दै गएँ । धेरै साथीहरूले पढ्न थन्क्याइएका राई मेरो मुख्य पठन सामग्री हुँदै जानुभयो ।
सरलबाट जटिलतिर उक्लिँदै गए, मेरा पठन रोजाइहरू । तेस्रो आयाम र लीला मैले सँगसँगै पढ्दै गएँ र तिनको समानता र भेदहरू पनि खोज्दै गएँ । एक दिन लाग्यो मैले राईलाई बुझ्न सिकेँ । त्यस दिनदेखि उहाँले लेखेका जे पनि सजिला लाग्दै गए । प्रज्ञाप्रतिष्ठानको सम्पादन कक्षमा अविनाश श्रेष्ठले एउटा प्रकाशोन्मुख कथाको कम्प्युटर लिपि दिँदै भन्नुभो, कृष्णजी इन्द्रबहादुर राई सरको नयाँ कथा आएको छ, हेर्नोस् त । ‘झ्याल’ कथा थियो त्यो ।
पहिलो वाक्यले नै तान्यो । लेखिएको थियो, ‘आइपुग्यो कथामा’ । कहाँबाट कविता, निबन्ध, उपन्यास, नाटक हुँदै हिँडेको थियो होला, अब कथामा आइपुगेछ । शीर्ष झ्याल छ तर भित्र जङ्गल छ, पहाड छ, नदी छ, जनावर छन्, चरा बारुला केके छन् केके । ध्वनि, रङ, चित्र अनेक छन्, कथाभरि । शब्दहरू अनेकतिर पोखिएर, छरिएर, बटारिएर तरंगिएर सङ्गीतमय र कर्कश हुँदै दुर्बोध्यताको खेल खेल्दछन् ।
पात्र घटना विषयवस्तु, सन्दर्भ, सन्देश अनेक अपेक्षा गरिन्छ, कथाभित्र । झ्याल कथा नकथाहरूको कथा, नपात्रहरूका पात्र, नविषयहरूको विषय भएको छ । नछापिँदै पढ्न पाएको त्यो कथा छापिएपछि पनि फेरि बुझ्न उत्तिकै समय लाग्यो । म राईलाई बुझ्छु भन्ने अहम् बोकेको पाठक तर फेरि मेरा दाँतमा ढुङ्गा लागे ।
‘बाघ’ कथा बुझ्न मलाई त्यस्तै गाह्रो परेको थियो । जुन दिन बुझेँ, त्यसपछि तीन दिन अरू कुनै कथा पढिनँ । एउटा दिनको सामान्यता, ‘जयमाया आफूमात्र लिखापानी आइपुगी’, ‘खीर’ जस्ता सजिला कथा लेख्ने उनी ‘आँगनको घाममा लाटा’, ‘ऊ त्यसरी बाँचेको छ त्यसरी नै’, ‘ब्लाक आउट काजु बोदाम छोरा’ जस्ता अप्ठ्यारा कथा पनि लेखिएका छन् ।
‘रातभरि हुरी चल्यो’, ‘हामी जस्तै मैनाकी आमा’, ‘जार भएकै एउटा कथा ’ जस्ता कथा कहाँ पढ्न पाउनु उहाँले नलेखेको भए । इन्द्रबहादुर राई पहिला सर्जक हुन्, त्यसपछि सिद्धान्तकार । उहाँले आफ्नै लेखनसिद्धान्तहरू नबनाएको भए पनि बनिएका कुनै सिद्धान्तको घरको राम्रै आसनमा अडिन पाउनुहुँदो हो ।
शरीरको उमेरले जित्न नसकेको तरुणो बुद्धिको घाग मानिस हो उहाँ । सन १९९७ मा सिलगढीमा भएको साझा प्रकाशनको शाखा कार्यालयको उद्घाटनमा नेपाल र भारतका प्रसिद्ध साहित्यकारहरूसँग मेरो हात समातेर डुलाउँदै परिचय गराइदिएको क्षण म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ । वाद-विवाद, संवाद सबैमा तानिँदै निरन्तर चिन्तनशील जीवन बाँची आइरहनुभएका राई हामी हरेक लेखकका लागि प्रेरणका स्रोत हुनुहुन्छ ।
जहाँ जहिले भेटे पनि सधैं साहित्य र दर्शनका कुरा हुन्थे । सधैं नयाँ–नयाँ प्रयोग र लेखनका कुरा हुन्थे । उहाँबाट सधैं आफूले नसुनेका वा नपढेका कुरा सुन्न पाएर खुशी र अचम्म दुवै लाग्थ्यो । कसरी कहिले उहाँ ती कुराहरू पढ्नुहुन्छ होला ? आधुनिकभन्दा आधुनिक कुरा कहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ होला । केके धेरै पढिरहने ठानेर मनमनै अहम् भरिएको म जहिले पनि उहाँलाई भेटेपछि फेरि आफ्नै कदजस्तो होचो भएर फर्किन्थेँ ।
उहाँभित्रको त्यही ज्ञानको गहिराइले मलाई निरन्तर तानिरह्यो । मलाई कहिल्यै यस्तो लागेन कि अब आईबी राई बूढो हुनुभो । वर्षैपिच्छे शरीर बूढो हुँदै गए पनि बुद्धिले उहाँ कहिल्यै पुरानो हुनुभएन । सायद त्यही भएर मेरो सबैभन्दा घनिष्ठ बौद्धिक साथी उहाँ नै हुनुभयो । सामान्यतया हरेक वर्ष उहाँलाई भेट्न हामी कहिले दार्जीलिङ, कहिले सिलगढी पुगिरहन्थ्यौँ ।
झापामा कुनै ठीकठीकैको साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने बित्तिकै हामी उहाँलाई निम्तो गर्न दार्जीलिङ पुगिसक्थ्यौँ । अनि उहाँले पनि कहिल्यै हाम्रो निम्तोलाई अस्वीकार गर्नुभएन । २०४५ साल कात्तिकमा झापाको धुलाबारीमा आयोजित तेस्रो आयामको २५ वर्षे समारोहमा पहिलोपल्ट उहाँलाई भेटेदेखि र त्यस समारोहमा उहाँले दिएको प्रवचन सुनेदेखि नै म उहाँको बौद्धिक व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएको थिएँ र त्यो प्रभावले आजसम्म पनि घट्नुपरेको छैन ।
इन्द्रबहादुर राईलाई मैले कहिल्यै नयाँ कुरा सुनाउँन पाइनँ । आफूले के–के नयाँ कुरा चाल पाएर गयो, कुरो चलाउन खोज्यो, शुरु गरिनसक्दै ए अँ साँच्ची अचेल त यस्तो त छ त भनेर त्यस विषयमा लामो व्याख्या गर्न थालिहाल्ने । दर्शनलाई जीवन र साहित्यमा यस तरिकाले ल्याउन सक्ने अरू कुनै मानिससँग मेरो प्रत्यक्ष सङ्गत हुन सकेन । नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा इन्द्रबहादुर राई जत्तिको अग्लो धुरी व्यक्ति जीवित रूपमा उहाँका अघि अरू कसैलाई उभ्याउन सकिँदैन ।
साधारण किसिमले असाधारण विचार पस्किने उहाँको विशेषता मलाई खास लाग्छ । कुनै पनि सभामा जब उहाँ उभिनुहुन्छ, स्रोताहरू आफ्ना मतहरूलाई केही क्षण स्थगन गरेर ध्यानमग्न हुन पुग्छन् । ‘विपना कतिपय’ कथासङ्ग्रहबाट ग्रन्थयात्रामा प्रवेश गर्नुभएका उहाँका डेढ दर्जनजति कृति सार्वजनिक भइसकेका छन् । जति कृति बजारमा आए तिनले पाठकमा विशेष अर्थ बोकेर आए ।
कतै एक ठाउँमा पढेको थिएँ उहाँले लेख्नुभएको छ ‘मायादेवी थापा नभएकी भए म नहुने’ । यो वाक्यले बोक्ने प्रेम र गृहस्थीको सम्बन्धको हामी अर्थ लगाउन सक्छौँ । एउटा पुरुष कतिसम्म महिलामा निर्भर हुन्छ भन्ने यो उदाहरण हो । ६८ वर्षअघि २३ र १९ वर्षको उमेरमा भएको प्रेमविवाहले उहाँहरूलाई आदर्श चिन्तनको सुन्दर संसारमा सधैं डुलाइरह्यो । मैले उहाँलाई एक्लै परदेशमा कहिल्यै देखिनँ । गम्भीर प्रकृतिकी आमै बौद्धिकतामा आईबी राईकै पत्नी भन्न सुहाउने हुनुहुन्थ्यो ।
कहिलेकाहीँ उहाँसँग मात्र कुरा गर्दा मलाई यस्तो लागेको थियो । मेरो जीवनको ३० वर्षको सङ्गतमा मैले कहिल्यै राईले व्यक्तिगत वा पारिवारिक कुरा गरेको सुनिनँ । एक किसिमको निरपेक्षता देख्थेँ, उहाँमा । स्थितप्रज्ञ जस्तो लाग्थ्यो उहाँ । मेरो आमा बित्नुभो, सीताजी बित्नुभो । दुवैसँग उहाँको गहिरो चिनजान थियो ।
जहिले भेट्दा पनि आमालाई कस्तो छ ? बुहारीलाई कस्तो छ ? भनेर सोधिरहने तर, जब उहाँहरू बित्नुभो राई सरले त्यसलाई उस्तो शोकको रूपमा लिएजस्तो लागेन । मलाई लाग्छ मनभन्दा बुद्धि अघि लगाएर बाँचिरहेको हुनुहुन्छ, उहाँ यति लामो आयुसम्म । सन् २०१६ को अगस्टमा ८६ वर्षको उमेरमा आमैको निधन भयो । ६८ वर्ष लामो जोडी टुटेको थियो । उमेर त शरीरको मात्र हुन्छ, मनको हुँदैन । पत्नीशोक भोगिसकेको मलाई उहाँ कस्तो मनस्थितिमा हुनुहोला भन्ने बुझ्न गाह्रो थिएन । गत हिउँदमा उहाँलाई भेट्न सुमन्त न्यौपाने र म दार्जीलिङ पुग्यौँ । सुमन्तले राईको ‘लीलालेखन’मा ‘बुद्धको शून्यवाद’ विषयमा विद्यावारिधिको काम गर्दै गरेकाले उनले धेरै जिज्ञासा बोकेका थिए । तर, यस पालि महले टन्न भरिएको चाकाजस्तो बुद्धिले भरिएको इन्द्रबहादुर हुनुहुन्न थियो लोचनगर दार्जीलिङमा ।
शोकलाई शक्तिमा बदलेर बौद्धिकताको युद्धमा हुनुहोला । यसपालि साङ्ख्य दर्शन सुन्न पाइएला भन्ने सोचेको मैले उहाँलाई एउटा ९१ वर्षको बूढो मान्छे मात्र भेटेँ । बोली लर्बरिएको, खुट्टा धर्खरिएका, अनुहार सोहोरिएको, कान कमजोर, एउटा आँखाले बन्दै काम नगर्ने, स्मृति घट्दै गएको । उहाँ पनि अरू जस्तै सामान्य शोकग्रस्त मानिस हुनुभएको थियो । बुद्धिले साथ छोडेको र मनले शासन गरेको कमजोर पुरुष हुनुभएको थियो ।
छेउमा बसेर सोधेँ, ‘निद्रा कत्तिको लाग्छ ?’ प्रश्न गरेको निकै बेरपछि भन्नुभो, ‘जहान बितेपछि मनमा कुरा खेलिबस्छ ।’ बिहान चार बजेतिर यसो आँखा लाग्छ अनि त फेरि ब्युँझिहाल्छु । मोतीविन्दुले ढाकिएका आँखामा निराशाको बादल झन् बाक्लो गरी पोतिएको थियो । भूगोलको पल्लै छेउमा पुगेको मैले फेरि उहाँलाई स–शरीर भेटूँला/नभेटूँला भन्ने कुराले भावुक बनेँ । बौद्धिकतासँग खेलेर कहिल्यै नअघाउने मान्छे एकाएक भावनाको जङ्गलमा पुग्नुभएको देखेँ । पत्नीवियोगको यो चोट खप्नुपर्छ भनेर मैले सम्झाउने ठाउँ थिएन । सम्झेँ, सतीदेवीको लास काँधमा बोकेर शिवजी किन हिँडे होलान् ।